The XNUMX Digital Communication Trends That Will Boost Your Business
N’ebe ọ bụla ịlere anya, o doro anya na etinyerela teknụzụ ekwentị na ọha mmadụ. Dabere na Nnyocha Ahịa Allied, nha ahịa ahịa ngwa ụwa ruru $ 106.27 na 2018 ma na-atụ anya iru $ 407.31 site na 2026. Uru nke ngwa na-eweta na azụmaahịa enweghị ike ịkọwa. Ka ahịa ekwentị na-eto eto, mkpa ụlọ ọrụ na-etinye ndị ahịa ha na ngwa mkpanaka ga-adịwanye elu. N'ihi mgbanwe nke
Ọ bụrụ na ị jụọ mmadụ iri na abụọ ahịa gị n'ụlọnga nwe ihe ha na-eme, ma ha na-eto eto, na otú ha si erite uru na ọrụ ha na-enye… M pụtara ụfọdụ ị ga-enweta iri na abuo dị iche iche azịza ọ bụla. Enwere m obere obi abụọ na anyị niile hụrụ ihe anyị na-eme maka ndị ahịa anyị aka, mana anyị niile na-ahụ ụzọ anyị dị mma ma na-eduga na ntụzịaka ahụ. 2018 RSW / US Marketer-Agency New Year Outlook Infographic dabere na nyocha anyị kachasị ọhụrụ,